ဘယ်လို ချစ်သူမျိုးလဲ ??? – Gentleman Magazine
ဘယ်လို ချစ်သူမျိုးလဲ ???
21/06/2017 22/06/2017 escapetravelmagazine
ဘယျလို ခဈြသူမြိုးလဲ ???
မိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ ခဈြသူရညျးစားအဖွဈ တှဲမိပွီဆိုတာနဲ့ သငျကိုယျတိုငျတောငျမှ သတိမထားမိခဲ့တဲ့ သငျ့ရဲ့စရိုကျလက်ခဏာတှေ ပျေါထှကျလာလရှေိ့ပါတယျ။ သငျက ဘယျလိုခဈြသူယောင်ျကြားလေးမြိုးဆိုတာကို သငျ့ရဲ့အပေါငျးအသငျးရောငျးရငျးတှရှေမှေ့ာ အနညျးအကဉျြးပဲ ပွောဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ မွားနတျမောငျရဲ့ ပဈခကျြက သငျ့ကိုဘယျလောကျအထိ သကျရောကျမှုရှိလဲဆိုတာက မိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ ပတျသကျမိပွီဆိုမှာ သိလာနိုငျတာဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောမှာ ယောင်ျကြားလေးတှကေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကှဲပွားစှာ ပွုမူတတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခဈြသူယောင်ျကြားလေးတှရေဲ့ သဘောသဘာဝပျေါမှာ မူတညျပွီး အခွခေံအားဖွငျ့ အမြိုးအစား(၇)ခု ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။ သငျရော ဘယျလိုအမြိုးအစားလညျး ဆနျးစဈကွညျ့လိုကျပါ။
ဒီအမြိုးအစားမှာတော့ သူ့ကောငျမလေးနဲ့ပတျသကျပွီး သူစိတျခယြုံကွညျရတဲ့သူ ကမ်ဘာမှာမရှိဘူးလို့ ခံယူထားတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ခဈြသူယောင်ျကြားလေးမြိုးက ပုတျသငျညိုတဈကောငျက ဖမျးတော့မယျ့သားကောငျကို မမှိတျမသုနျကွညျ့သလို သူ့ကောငျမလေးရဲ့ လှုပျရှားမှုအစအဆုံးကို (ခေါငျးလှညျ့ပွီး ဘယျကိုကွညျ့တာလဲဆိုတာကအစ) အမွဲတစေ စောငျ့ကွညျ့နတေတျပါတယျ။ ဒီလိုယောင်ျကြားလေးမြိုးက သူတို့ရဲ့ပငျကိုယျစိတျမလုံခွုံမှုနဲ့ မိမိကိုယျကိုယုံကွညျမှုအားနညျးတဲ့အတှကျ ခဈြသူမိနျးကလေးကို မနာလိုသဝနျတိုတဲ့နညျးလမျးနဲ့ ဖွရှေငျးကွတာဖွဈပါတယျ။
ဒီကောငျလေးမြိုးကတော့ သူ့ကောငျမလေးကို အရမျးနာခံတတျသူမြိုးပါ။ သူ့လညျပငျးမှာ လညျပတျကွိုးတပျထားသလား ထငျရလောကျအောငျကို နာခံတတျသူပါ။ သူ့ရဲ့တညျရှိမှုက သူ့ကောငျမလေးကို အရှငျသခငျတဈယောကျလိုဆကျဆံပွီး ခိုငျးတာလုပျ၊ စရောသှားနဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့တဈခုတညျးအတှကျ ရညျရှယျထားတာမြိုးပါ။ တကယျလို့ သငျသာ ဒီလိုမြိုးဖွဈနမေယျဆိုရငျ သငျ့ကောငျမလေး ပဈလိုကျတဲ့ ကွကျအူခြောငျးကို လထေဲမှာတငျ ဖမျးနိုငျတဲ့အထိဖွဈလာဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
အမွဲတမျး ဘေးထိုငျ ဘိုငျကြ မှဲတနေတေတျသူမြိုးပါ။ သူ့ကောငျမလေးရဲ့ မုနျ့ဖိုး၊ လစာ စတဲ့ဝငျငှကေို ကပျသုံးနပွေီး အလကားကုနျးဆငျးရဖို့အတှကျဆို ဘာပဲဖွဈဖွဈလုပျတတျပါတယျ။ တဈခုခုစားကွသောကျကွပွီးလို့ ငှရှေငျးဖို့အခြိနျရောကျလာတာနဲ့ အိမျသာသှားတတျသူမြိုးပါ။ အခုစာဖတျနတေဲ့သူက မိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈပွီး ဒီလိုခဈြသူကောငျလေးမြိုးရှိတယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့က တဈခုလောကျသတိပေးခငျြပါတယျ။ အဲ့ဒီကောငျမြိုးတှကေ လဈရငျလညျး ခိုးတတျပါတယျ။
သူတငျထားတဲ့ Facebook Status တဈခုကို သူ့ကောငျမလေးက ဘာ Reaction မှမပေး၊ ဘာ Comment မှမပေးပဲ ဒီအတိုငျးကြျောသှားမိလိုကျရငျတောငျမှ ခကျြခငျြးပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသတျသတေော့မလောကျအထိ ခံစားတတျသူမြိုးပါ။ ဒီလိုလူမြိုးရဲ့ ကောငျမလေးအတှကျ ကံမကောငျးတာက သူတကယျမလုပျတာပါပဲ။ ဘာလို့ ငါ့ Status ကို ဂရုမစိုကျရတာလဲဆိုပွီး ပွဿနာရှာနတောက ဆိုးလှနျးလို့ပါ။
ဒီလို ခဈြသူကောငျလေးမြိုးကတော့ သူ့ရဲ့ ဂိမျးစကျပကျြသှားမှာပဲ ကောငျမလေးနဲ့စကားပွောဖို့ သတိရတတျသူမြိုးပါ။ ဂိမျးကစားနရေရငျ အညောငျးအညာဆနျ့ဖို့တောငျ အပွငျမထှကျခငျြတတျပါဘူး။
အစခေံလိုရညျးစားရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒီလိုလူမြိုးက သူ့ကောငျမလေးကို သူပိုငျဆိုငျတဲ့အရာတဈခုလို့ ထငျမွငျယူဆထားတတျကွပါတယျ။ သူ့ကောငျမလေး ဘယျသှားလဲ၊ ဘာလုပျလဲဆိုတာကို အခြိနျတိုငျးသိခငျြနသေူပါ။ ကောငျမလေးဝတျတဲ့ အဝတျအစား၊ သှားမယျ့ စားသောကျဆိုငျ၊ မှာမယျ့အစားအစာ၊ ပေါငျးတဲ့ အပေါငျးအသငျး စတဲ့ အစစအရာရာကို သူပဲ ဆုံးဖွတျပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ ကောငျမလေးဝမျးသှားတာကအစ သူ့စိတျတိုငျးကဖြွဈစခေငျြသူပါ။
ဒီလိုလူမြိုးက ခဈြသူရညျးစားတဈယောကျကို ရရှေညျတှဲလမေ့ရှိပါဘူး။ တဈယောကျတညျးသမားဖွဈနတေတျပွီး သူ့ပစ်စညျးကို ဘောငျးဘီထဲမှာပဲ မထားနိုငျသူမြိုးဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုယျသူ မိနျးကလေးတဈယောကျကို အခြိနျမရှေးဆှဲဆောငျသိမျးသှငျးနိုငျသူ တဈယောကျလို့ ဟနျဆောငျလှညျ့စားတတျပါတယျ။ ဒီလိုလိုမြိုးက စိတျအားငယျနတေဲ့မိနျးကလေးတှကေို ပိုပွီးတော့ နှဈသိမျ့ပေးတတျပါတယျ။ သူတို့အတှကျ လှယျကူတဲ့ပဈမှတျဖွဈနတောကွောငျ့ပါ။
အရမျးရိုမနျးတဈဆနျပွီး ခဈြတတျသူ၊ ကွငျနာတတျသူ ဖွဈပါတယျ။ ပဈကွှသှေားလောကျအောငျ ခြောမောခနျ့ညားပွီး ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့ အလိုကျကိုသိ၊ အလိုကျကိုလိုကျတတျသူမြိုးဖွဈပါတယျ။ အိပျရာထဲမှာလညျး အရညျအခငျြးပွညျ့ဝပွီး ဘဝအတှကျလညျး ယုံကွညျအားကိုးထိုကျသူမြိုးပါ။ စိတျမကောငျးစရာတဈခုကတော့ ဒီလိုလူမြိုး မရှိတာပါပဲ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူရည်းစားအဖြစ် တွဲမိပြီဆိုတာနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ သတိမထားမိခဲ့တဲ့ သင့်ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေ ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ သင်က ဘယ်လိုချစ်သူယောင်္ကျားလေးမျိုးဆိုတာကို သင့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေရှေ့မှာ အနည်းအကျဉ်းပဲ ပြောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မြားနတ်မောင်ရဲ့ ပစ်ချက်က သင့်ကိုဘယ်လောက်အထိ သက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာက မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်မိပြီဆိုမှာ သိလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကွဲပြားစွာ ပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အခြေခံအားဖြင့် အမျိုးအစား(၇)ခု ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လိုအမျိုးအစားလည်း ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒီအမျိုးအစားမှာတော့ သူ့ကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သူ ကမ္ဘာမှာမရှိဘူးလို့ ခံယူထားတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ချစ်သူယောင်္ကျားလေးမျိုးက ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်က ဖမ်းတော့မယ့်သားကောင်ကို မမှိတ်မသုန်ကြည့်သလို သူ့ကောင်မလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအစအဆုံးကို (ခေါင်းလှည့်ပြီး ဘယ်ကိုကြည့်တာလဲဆိုတာကအစ) အမြဲတစေ စောင့်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုယောင်္ကျားလေးမျိုးက သူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်မလုံခြုံမှုနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းတဲ့အတွက် ချစ်သူမိန်းကလေးကို မနာလိုသ၀န်တိုတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးမျိုးကတော့ သူ့ကောင်မလေးကို အရမ်းနာခံတတ်သူမျိုးပါ။ သူ့လည်ပင်းမှာ လည်ပတ်ကြိုးတပ်ထားသလား ထင်ရလောက်အောင်ကို နာခံတတ်သူပါ။ သူ့ရဲ့တည်ရှိမှုက သူ့ကောင်မလေးကို အရှင်သခင်တစ်ယောက်လိုဆက်ဆံပြီး ခိုင်းတာလုပ်၊ စေရာသွားနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တစ်ခုတည်းအတွက် ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးပါ။ တကယ်လို့ သင်သာ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သင့်ကောင်မလေး ပစ်လိုက်တဲ့ ကြက်အူချောင်းကို လေထဲမှာတင် ဖမ်းနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း ဘေးထိုင် ဘိုင်ကျ မွဲတေနေတတ်သူမျိုးပါ။ သူ့ကောင်မလေးရဲ့ မုန့်ဖိုး၊ လစာ စတဲ့ဝင်ငွေကို ကပ်သုံးနေပြီး အလကားကုန်းဆင်းရဖို့အတွက်ဆို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုစားကြသောက်ကြပြီးလို့ ငွေရှင်းဖို့အချိန်ရောက်လာတာနဲ့ အိမ်သာသွားတတ်သူမျိုးပါ။ အခုစာဖတ်နေတဲ့သူက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီလိုချစ်သူကောင်လေးမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က တစ်ခုလောက်သတိပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကောင်မျိုးတွေက လစ်ရင်လည်း ခိုးတတ်ပါတယ်။
သူတင်ထားတဲ့ Facebook Status တစ်ခုကို သူ့ကောင်မလေးက ဘာ Reaction မှမပေး၊ ဘာ Comment မှမပေးပဲ ဒီအတိုင်းကျော်သွားမိလိုက်ရင်တောင်မှ ချက်ချင်းပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေတော့မလောက်အထိ ခံစားတတ်သူမျိုးပါ။ ဒီလိုလူမျိုးရဲ့ ကောင်မလေးအတွက် ကံမကောင်းတာက သူတကယ်မလုပ်တာပါပဲ။ ဘာလို့ ငါ့ Status ကို ဂရုမစိုက်ရတာလဲဆိုပြီး ပြဿနာရှာနေတာက ဆိုးလွန်းလို့ပါ။
ဒီလို ချစ်သူကောင်လေးမျိုးကတော့ သူ့ရဲ့ ဂိမ်းစက်ပျက်သွားမှာပဲ ကောင်မလေးနဲ့စကားပြောဖို့ သတိရတတ်သူမျိုးပါ။ ဂိမ်းကစားနေရရင် အညောင်းအညာဆန့်ဖို့တောင် အပြင်မထွက်ချင်တတ်ပါဘူး။
အစေခံလိုရည်းစားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးက သူ့ကောင်မလေးကို သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ ထင်မြင်ယူဆထားတတ်ကြပါတယ်။ သူ့ကောင်မလေး ဘယ်သွားလဲ၊ ဘာလုပ်လဲဆိုတာကို အချိန်တိုင်းသိချင်နေသူပါ။ ကောင်မလေးဝတ်တဲ့ အ၀တ်အစား၊ သွားမယ့် စားသောက်ဆိုင်၊ မှာမယ့်အစားအစာ၊ ပေါင်းတဲ့ အပေါင်းအသင်း စတဲ့ အစစအရာရာကို သူပဲ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်မလေးဝမ်းသွားတာကအစ သူ့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေချင်သူပါ။
ဒီလိုလူမျိုးက ချစ်သူရည်းစားတစ်ယောက်ကို ရေရှည်တွဲလေ့မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်းသမားဖြစ်နေတတ်ပြီး သူ့ပစ္စည်းကို ဘောင်းဘီထဲမှာပဲ မထားနိုင်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အချိန်မရွေးဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းနိုင်သူ တစ်ယောက်လို့ ဟန်ဆောင်လှည့်စားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလိုမျိုးက စိတ်အားငယ်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကို ပိုပြီးတော့ နှစ်သိမ့်ပေးတတ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် လွယ်ကူတဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
အရမ်းရိုမန်းတစ်ဆန်ပြီး ချစ်တတ်သူ၊ ကြင်နာတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ်ကြွေသွားလောက်အောင် ချောမောခန့်ညားပြီး ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ အလိုက်ကိုသိ၊ အလိုက်ကိုလိုက်တတ်သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာလည်း အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး ဘ၀အတွက်လည်း ယုံကြည်အားကိုးထိုက်သူမျိုးပါ။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ဒီလိုလူမျိုး မရှိတာပါပဲ။
Previous: ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေက တစ်သက်တာသူငယ်ချင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ
Next: မိန်းကလေးကို အသည်းခိုက်သွားစေမည့် Foreplay နည်းလမ်းကောင်းများ